Phakathi ukulungisa kubalulekile ukuba alungiselele kwezindleko, ngaphandle ezingalindelekile. Ngakho-ke kuyadingeka noma ukulungiselela kusengaphambili imali eyengeziwe noma ukuze ulondoloze lapho ngithenga izinto zokwakha kanye ikamelo imishini. Esimeni sesibili, lesikahle kungaba ukufakwa ukonga izinga okusezingeni eliphezulu labathaki bamafutha kusukela inkampani Ledeme.
AmaShayina umakhi inkampani Ledeme - nomkhiqizi ehamba phambili intengo okungabizi ware sanitary ingxenye nge high okunezinhlobonhlobo. Izinhlu Ungakhetha ompompi for yokugezela noma ekhishini usinki wokugeza, kanye izesekeli ahlukahlukene.
Ledeme Mixer ekhiqizwa kusuka ekilasini A zethusi ingxubevange ngethusi lichaza ekwakheni akuyona esingaphansi 59%. Lezi imikhiqizo cartridges esakhelwe zakhiwe izitsha zobumba. Ikhwalithi ephezulu imikhiqizo kufezwa ngokusebenzisa ukusetshenziswa enkulu ekwakhekeni izingxenye kusukela izwe ehola abakhiqizi kuphela. Futhi, uhla kuhlanganisa onobuhle ezakheke ehlukahlukene, izinhlobo nobukhulu.
mixer ngamunye Ledeme, ekhiqizwa yinkampani, has a isakhiwo ekhethekile ngaphansi yokugezela noma ekhishini, ukufakwa phezu komduli, echibini noma yokugeza lokukhuphula ngigeza futhi bidet.
yokugezela ngamunye noma ekhishini, njengoba umthetho, ifakwe mixer, ngoba ngokuvamile Cranes ziye zaphelelwa isikhathi. manje amanzi lokushisa elawulwa isiba inqubo ulula ngemva Ledeme efakwe labathaki bamafutha. Umkhiqizi ukuze kube lula ihlukaniswe wonke amamodeli enjongweni kanye nomklamo walesi futhi kuncike intengo umkhiqizo. Ngu design labathaki bamafutha yilezi:
Herringbone mixer ine uhlobo Cranes amabili emaphethelweni bese itjhubhu (ihansi) phakathi. isilawuli lokushisa kwenzeka ngokuvula nokuvala ama-valve, ukugeleza kwamanzi ivela ihansi. Ngenxa yokuthi labathaki bamafutha esetshenziswa cartridges Ceramic kunokuba gaskets iraba, umkhiqizo esaphila isikhathi eside ngokwanele. Spout noma ihansi onobuhle isampula esisha sakhiwa umile futhi ezihambayo, kungase kube isimo lwalugobile noma kuqonde.
Single-isigwedlo mixer Ledeme ngokuqiniseka isesikhundleni ehamba phambili. Ukulungisa izinga lokushisa amamodeli we ukuhlelwa ezinjalo kulula futhi wenziwa ngesandla esisodwa, kubalulekile kuphela ukuze ujike isigwedlo eceleni. Lo mklamo yelula ukuphila komkhiqizo. Labathaki bamafutha ezenziwe metal sintered. Bath mixer Ledeme ekhishini noma model of the brand uzokwazi ukunikeza egumbini isitayela eliyingqayizivele futhi ngabanye.
Wall entabeni onobuhle zixhunywe ngqo wodonga olungaphezu usinki, ukucwila noma ubhavu. I ikhathalogi kuhlanganisa onobuhle Husak lwalugobile noma iqonde, iziyisikhombisa noma valve. Kulokhu itjhubhu has, e oyiyo aerator ekuvimbeleni ofafaza amanzi.
Ledeme mixer akukhona nje kuphela ukuthi design ehlukene, kodwa ezahlukene ngenhloso. Le nkampani ekhiqiza imikhiqizo ukufakwa kuzo zombili yokugezela ekhishini. Ikhishi ompompi ifakwe eside swivel itjhubhu futhi izihlambi kanye zokugezela Gussaki kungaba esifushane, eside, iselula ongasanyakazi. Futhi, amanye amamodeli babe nesisekeli ozikhethela ngesimo umphefumulo, hhayi nje ngobe kutawutfutfukisa yokugezela, kodwa futhi ukuze zithole ukudla.
Ngokubukeka, kulula abone inhloso yesikhangiso mixer ngamunye, kungakhathaliseki nomklamo walo. Indlu yangasese lingakhiwa ne ventel umkhiqizo noma isigwedlo, isimo main - kufanele kube gander eside futhi ovundlile, kanye ogibele udonga. Uma mixer kuphezulu, kufanelekile ekhishini. Geza izitsha kanye ukugcwalisa izigubhu ezahlukene amanzi ageleza ngaphansi kuyoba ukhululekile kakhulu. Futhi uma kukhona isidingo ukuhlomisa eshaweni ezihlukanisa amahhovisi isethwe Ledeme mixer ngaphandle itjhubhu, kodwa kokuba hose elineshawa tube.
imodeli ngamunye has umumo ovikelekile, sengathi zahlelenjwa amanzi. Ngo uchungechunge ahlukene onobuhle ungaba izinguqulo eziningana ezahlukene. Yonke imikhiqizo yethu zenzelwe isikimu efanayo futhi babe cartridges ejwayelekile.
Emanzini kampompi uvamise ukwelashwa chlorine ukuze magciwane, njengoba kungase kuholele kumiswa lime ezifakwa kwi mixer. Ukuze ususe kubalulekile ukusebenzisa izindlela ezahlukene. Ngeshwa, amakhemikhali amaningi kungalimaza izingxenye zensimbi we mixer. Ukuze yokuhlanza onokwethenjelwa futhi ephephile kubalulekile ukusebenzisa amanzi avamile, isipanji noma ngezidwedwe. Lesikahle kungaba indwangu eyenziwe wangaphandle. Okubalulekile okunjalo akabashiyi amabala imihuzuko. Ukuze ahlanze umkhiqizo kufanele siyakazwe ngamanzi bese Sula ngendwangu eyomile ukuze bathuthukise ulimi it.
Ngezikhathi ezithile kufanele ahlanze ngokucophelela Ledeme labathaki bamafutha. Uphenyo hostesses abanolwazi aqukethe izincomo yokuhlanza:
ukusetshenziswa amathuluzi akhethekile;
ngokucophelela ukuhlanza umkhiqizo.
Ukulandela lezi amathiphu, ungakwazi isikhathi ekuphileni labathaki bamafutha futhi ugweme iloli ezingadingekile.
Vasoconstrictor ngeso lehla: isicelo futhi amagama izidakamizwa